Lahatsoratra voalohany! Tongasoa eto amin’ny bilaogin’ny vondrom-piarahamonina GV ! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2019 15:10 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Septambra 2014)
Mpikambana ao amin'ny Global Voices tany amin'ny Vovonana GV 2010 tany Santiago Shily, avy amin'ny mpisera Flickr Oso.
Nihalehibe noho izay nisiany teo aloha ny vondrom-piarahamonina Global Voices izay manaporofo ny maha-zava-dehibe ny asa ataontsika ho an'ny vahoaka manerana izao tontolo izao. Ny fanamby tonga amin'ny fananana vondrom-piarahamonina lehibe sy mahafinaritra dia ny fitadiavan-tahala ho antsika ifampizarana sy ifandraisana amin'ny tsirairay avy ho fanalana azy sy malalaka fa tsy mihataka amin'ny votoaty manan-danja sy matotra izay mamaritra ny renintranonkalantsika sy ny fitantarana mifanaraka amin'ny maha-fampitam-baovaon'olon-tsotra.
Idiro àry ny bilaogin'ny vondrom-piarahamonina. Ity no toerana iray ahafahantsika mihaona sy manoratra tantara mahafinaritra, tantara manokana izay tsy misy hifandraisany amin'ny tranonkala fototra. Antenainay ihany koa fa hahita izany ho toerana tsara hanehoana hevitra ianao sy hahatsapanao momba ny asa ataon'ny Global Voices sy ny hoavintsika amin'ny maha-vondrom-piarahamonina antsika.
Misaotra amin'ny fandraisana anjara ary manantena izahay fa hanoratra lahatsoratra tsy ho ela ianao!
Fanazavana fanampiny: Ity misy fanehoana ny fomba fiasa vaovao izay nampidiriko tao anatin'ity lahatsoratra voalohany ity ilaina amin'izany. Ity ambany ity no boaty fanitarana avy amin'ny [shortcode]expand[/shortcode] shortcode avy amin'ny Plugin-o-Matic plugin.
[expand title='Custom “title” izay miseho rehefa mihidy ny boaty ‘swaptitle='Custom “swaptitle” izay miseho rehefa misokatra ny boaty (tsindrio rehefa hanidy) ‘]